Dinner with Mugabe: The Untold Story of a Freedom Fighter Who Became a Tyrant by Heidi Holland - ISBN: 9780141040790 (Penguin)
This penetrating, timely portrait of Robert Mugabe is the psychobiography of a man whose once brilliant career has ruined Zimbabwe and cast shame on the African continent. Heidi Holland's tireless investigation begins with her having dinner with Mugabe, the freedom fighter, and e...nds in a searching interview with Zimbabwe's president more than 30 years later. The author charts Mugabe's gradual self-destruction, and uncovers some of the most respectable international players in the Zimbabwe tragedy. Probing the mystery of Africa's loyalty to one of its worst dictators, Holland explores the contradictions that cloud the life of the man who had embodied a continent's promise.
9781742676784 (Apr 2011)
Prime ministers - Biography - Zimbabwe, Zimbabwe - Politics and government - 1980
'By tracking down the key figures in Mugabe's life, Heidi Holland has come closer than anyone else to discovering what makes the old dictator tick' - David Blair, Daily Telegraph'The most intimate portrait yet produced of Zimbabwe's clever but brutal leader' - Adam Roberts, The Economist